Toamasina : teratany frantsay tratra nanao horonantsary mamoafady – Vaovao Madagasikara
Voasambotry ny polisy Judiciaire ao Toamasina ny teratany frantsay, 44 taona tratra nivarotra tovovavy malagasy hanaovana horonantsary mamoafady tao Ambohijafy Toamasina, ny herinandro teo. Natolotra ny fampanovana, omaly izy…
Teo am-pivarotra ireo tovovavy malagasy hanaovana sy hanao horonantsary mamoafady no tratra ity teratany frantsay ity. Araka ny fanazavan’ny kaomisera Gerverin Raelison, nahazo loharanom-baovao izy ireo momba ny fisian’ity frantsay mivarotra tovovavy malagasy ity nandritra ny andro maromaro izay. Nandeha ny fikarohana ka noraisim-potsiny izy. Voalaza fa asaina milalao horonantsary mamoafady ary alaina sary amin’ny alalan’ny “webcam” ireo tovovavy ireo. Tsy vitan’izay fa mbola ampiarahina amin’ireo fitaovana artifisialy “sex toys” fampiasan’ireo vahiny milalao itony horonantsary itony niaraka tamin’izy ireo. Mbola nahitana fitaovana hafa koa tao an-tranony nandritra ny fisavana nataon’ny polisy niaraka tamin’ireo baranjely izay natokana hanodinana manokana ny horonantsary lalaovan’ireo tovovavy malagasy ireo. Fantatra tamin’ny alalan’ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy hatrany fa tranonkalam-pifandraisana iray any Frantsa no voalaza fa mividy ilay horonantsary, saingy miankina amin’ny halavany koa ny vidin’izany.
Taratasy fahazoan-dalana momba ny fizahantany no nahafan’ity Frantsay ity niditra teto Madagasikara. Nivadika zavatra hafa izany taty aoriana. Manodidina ny 4 hetsy Ar ka hatramin’ny 1 tapitrisa Ar ny vola aloan’ireo mpanjifa avy ivelany ho karaman’ireo tovovavy malagasy ireo, raha ny fanazavana hatrany. Mbola tratran’ny polisy tao an-tranon’ilay vazaha teo am-panaovana fihetsika hafahafa manaitaitra ny mpanjifa amin’ny alalan’ireo fitaovana, ny tovovavy malagasy roa.
Nandray ny andraikiny ny polisy ka nangataka taratasy fandroahana ity teratany frantsay ity.